Qaraxyadu waxay mas'uul ka noqon karaan harooyinka adag ee Saturn ee Titan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Qaraxyada waxay mas'uul ka noqon karaan harooyinka adag ee Saturn ee Titan - BGR
Saynisyahannadu waxbadan bay ka barteen Titan, Dayax gacmeedka Saturn, iyagoo u mahadcelinaya dayax gacmeedkii NASA ee Cassini, oo meeraha u soo galay in kabadan toban sano ka hor NASA. ESA waxay ahayd inay soo afjarto howlaheedii 2017. Hawshan ayaa ahayd
Titan, oo ah dunida kale ee aan ku naqaanno nidaamkeenna qoraxda iyo cidda Dareeraya dareeraha dushiisa waxaa si fiican loogu yaqaanaa harooyinkeeda biyo-qabatinka leh ee ay ka buuxaan biyo-xireennada, laakiin waa qaab-dhismeedka sare ee xeebaha kuwanu waa diiradda dadaalka cusub ee cilmi-baarista lagu daabacay Dabiiciga Dabiiciga .
Si ka duwan harooyinka badan ee meeraha, harooyin badan oo Titan dusha sare ah waxaa ku wareegsan hareeraha waran dheer oo boqolaal cagood cirka u jira. Moodeel cusub ayaa soo jeedinaya sharraxaad suurta gal ah.
Iyadoo la adeegsanayo xogta radar-ka ee Cassini, saynisyahano waxay dhiseen muuqaallo kumbuyuutar oo muujinaya sida kululaynta qaraxyada nitrogen ee qolofta Titan u samaysan karto. maddiibadihii. Baarayaasha waxaay sheegeen in ay macquul tahay in dareeraha loo yaqaan 'Nitroor dareere', oo ay kujiraan xilliyada qaboojinta iyo kuleylka sabab la xiriira jawiga cagaaran ee jawiga Titan, uu si diiran ugu kululaaday inuu sababi karo, inta lagu gudajiro uumiga. Qarxid-dillaac iyo dhisme dhir.  Xaaladda mala-awaalka ah, jiilaalku waxay noqdeen meelo ku habboon oo biyo-dhaamin loo sameeyo, oo aasaaska u ah harooyinka aan ku aragno dayaxa maanta.
taasi waxay ahayd halxidhaale weyn, ayay tidhi Linda Spilker oo ka tirsan Shaybaarka Jet Propulsion Laborat laga bilaabo NASA . "Maaddaama saynisyahannadu ay sii wadaan ka faa'iideysiga tasiilaadka xogta 'Cassini', waxaan sii wadi doonnaa inaan soo uruurinno qaybo badan oo halxiraala ah. Tobannaan sano ee soo socda, waxaan si wanaagsan u fahmi doonnaa nidaamka Saturn. "
Source Source: NASA / JPL / Jaamacadda Arizona
Astronautsku waxay qaadaan tallaabo u dhaw dhismaha saldhig ka baxsan adduunka - BGR